मन्त्रिपरिषद् निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ताले भने– डा. केसीका अधिकांश माग पूरा भइसके
काठमाडौं– सरकारले डा. गोविन्द केसीका अधिकांश माग पूरा गरिसकेको दाबी गरेको छ । बिहीबार मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकारले डा. केसीका अधिकांश माग पूरा गरिसकेको बताए ।
केसीले उठाएका अधिकांश माग संसदीय समितिले नै सम्बोधन गरिसकेको दाबी गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले यस समय डा. केसीले उत्सव मनाउनुपर्ने टिप्पणी गरे ।
सरकारले केसीका माग पूरा गरेको दाबी गरे पनि डा. केसीले भने आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै बुधबार इलामबाट अनशन सुरु गरेका छन् ।
निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारले राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा सार्वजनिक बिदा नदिने बताए । गतवर्ष सरकारले अबदेखि ‘पृथ्वी जयन्ती’ हटाएर २७ पुसमै ‘राष्ट्रिय एकता दिवस’ मनाउने निर्णय गरेको थियो ।
बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा गत पुस १९ र २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गरियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने नेपाल–भारत सचिवस्तरीय संयुक्त जलस्रोत समितिको बैंठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव डा. सञ्जय शर्मालाई नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरी भाग लिन पठाउने समेत निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक दिलीपराज रेग्मीको सेवा अवधि तीन वर्ष पूरा भएको भन्दै गत २३ पुसदेखि लागू हुनेगरी निजलाई अनुसन्धान विभागाको सेवाबाट अवकाश दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ । बैठकले रिक्त रहने उक्त पदमा विभागका अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक गणेशकुमार अधिकारीलाई सोही दिनदेखि लागू हुनेगरी बढुवा गरेको छ ।
आईपीयूको १४१ औं बैठकमा सहभागी हुन अध्यक्ष तिमिल्सिना सर्बिया प्रस्थान
जहाज डिले भएको भन्दै राजपा सांसद साहले गरे बुद्ध एयरको काउन्टर तोडफोड
सोल्टी होटल पुगे राष्ट्रपति सी
चिनियाँ राष्ट्रपति सी आज नेपाल आउने